सल्यानका सबै स्थानिय तहमा युवा मञ्च गठन	Postpati – News For All
सल्यानका सबै स्थानिय तहमा युवा मञ्च गठन
सुशासन प्रक्रियामा यसवालाइ अर्थपूर्ण सहभागीता बनाइने
पोष्टपाटी २०७६ आश्विन ११,शनिबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
असोज ११, सल्यान । युवाहरुको व्यक्तिगत, संस्थागत, सामाजिक र आर्थिक सशक्तिकरण गरि सुशासन प्रक्रियामा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उद्देश्यले सल्यानमा युवा मञ्च गठन गरिएको छ ।
सिद्ध कुमाख, त्रिवेणी र कपुरकोट गाउँपालिकामा पालिका स्तरिय युवा मञ्च गठन गरिएको सुशासनका लागी नागरिक सहभागीता कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक जि.एस. नेपालीले जानकारि दिए ।
लगत्तै कालिमाटी र दार्मा गाउँपालिकामा पनि यस प्रकारको मञ्च गठन गरिने उनले जनाए । सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा विरेन्द्र वोहोरा संयोजक र प्रतिमा मगर सदस्य सचिव रहेको ९ सदस्यीय युवा मञ्च गठन गरिएको छ ।
युवा मञ्च गठन
चाेरीगर्ने ५ जना महाराजगन्ज प्रहरीकाे फन्दामा !
स्थगित भएको एनआरएनको चुनाव १० बजे देखि सुरु हुँदै (सुचना सहित)